मूल्य समायोजनपछि कालिका लघुवित्तको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेप्सेले मूल्य समायोजन गर्दै कालिका लघुवित्तको प्रतिकित्ता १ हजार २९१ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघि यो लघुवित्तको अन्तिम कारोबार मूल्य प्रतिकित्ता १ हजार ४२० रुपैयाँ रहेको थियो। संस्थाले...
मूल्य समायोजनपछि सूर्योदय र सारथी नेपाल लघुवित्तको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूर्योदय लघुवित्त र सारथी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको आज बिहीबार सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेप्सेले सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता सूर्योदयको १ हजार ९६० रुपैयाँ र सारथी नेपालको १ हजार ५९६ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार...
मूल्य समायोजनपछि उन्नति सहकार्य र आरम्भ चौतारी लघुवित्तको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बोनस सेयरका लागि नेप्सेमा सूचीकृत दुई लघुवित्त संस्थाको सेयरमूल्य आज बुधबार समायोजन गरिएको छ। नेप्सेले उन्नति सहकार्य र आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता उन्नति सहकार्यको २ हजार ३१७ रुपैयाँ र आरम्भ चौतारीको १...
मूल्य समायोजनपछि यी ३ कम्पनीको सेयरभाउ कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको लाभांश प्रयोजनका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले आज ३ कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले नेपाल इन्स्योरेन्स, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक र मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता नेपाल इन्स्योरेन्सको ७८१, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको १६९...
मूल्य समायोजनपछि महुली, डिप्रोक्स र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको भाउ कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले बोनस सेयरका लागि महुली सामुदायिक लघुवित्त, डिप्रोक्स लघुवित्त र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको मूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता महुली सामुदायिक को २ हजार १८८ रुपैयाँ, डिप्रोक्सको १ हजार ७२० रुपैयाँ र सांग्रिलाको २०२ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघिको अन्तिम...
५०% हकप्रदका लागि अरुण भ्यालीको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । हकप्रद सेयरका लागि अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले ५० प्रतिशत हकप्रदका लागि अरुण भ्यालीको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता २४२ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार अरुण भ्यालीको प्रतिकित्ता ३१३ रुपैयाँ रहेको थियो।...
मूल्य समायोजन मिर्मिरे लघुवित्तको सेयरभाउ कति?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले आज मिर्मिरे लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता १ हजार ३७१ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघिको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार मिर्मिरेको प्रतिकित्ता १ हजार ४९७ रुपैयाँ थियो। अब...
मूल्य समायोजनपछि महालक्ष्मी विकास बैंक र नेपाल हाइड्रो डेभलपर्सको सेयर भाउ कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले मंगलबार महालक्ष्मी विकास बैंक र नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि महालक्ष्मी विकास बैंक र नेपाल हाइड्रो डेभलपर्सको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। समायोजित मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता महालक्ष्मी विकास बैंकको २६९ रुपैयाँ र...
दुई कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन, आज कतिमा खुल्नेछ कारोबार ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि २ कम्पनीको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले आज सिर्जना फाइनान्स र महिला सहयात्रा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजित मूल्यअनुसार सिर्जना फाइनान्सको प्रतिकित्ता १८५ रुपैयाँ र महिला सहयात्राको १ हजार १४५ रुपैयाँ कायम...
दुई लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन, कुन–कुनको?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले दुई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले स्वावलम्बन र सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजनपछि स्वावलम्बनको प्रतिकित्ता १ हजार ६६५ रुपैयाँ र सबैको लघुवित्तको १ हजार २२९ रुपैयाँ कायम...
समायोजनपछि शिखरको मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि शिखर इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता २ हजार ५२ रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघि अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार यो कम्पनीको प्रतिकित्ता २ हजार ६२२ रुपैयाँ कायम भएको थियो।...
सेयरमूल्य समायोजनपछि स्वरोजगार लघुवित्तको प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले बोनस सेयरका लागि स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले सेयरमूल्य समायोजन गर्दै स्वरोजगार लघुवित्तको प्रतिकित्ता १ हजार ३१५ रुपैयाँ कायम गरेको छ। यसअघि यो लघुवित्तको अन्तिम कारोबार मूल्य प्रतिकित्ता १ हजार ४७८ रुपैयाँ रहेको थियो। आज आइतबार...
गणपति र नेसनल माइक्रोफाइनान्सको सेयरमूल्य समायोजन
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि दुई लघुवित्तको सेयरमूल्य आज शुक्रबार समायोजन गरेको छ। नेप्सेले गणपति लघुवित्त र नेसनल माइक्रोफाइनान्सको सेयरमूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजनपछि गणपतिको सेयरमूल्य प्रतिकित्ता १ हजार ५४२ रुपैयाँ र नेसनलको २ हजार ७४८ रुपैयाँ कायम भएको छ। यसअघि यी दुवै...
निर्धन उत्थान लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले गत आर्थिक वर्षको बोनस सेयरका लागि निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयरमूल्य समायोजन गरेको छ। नेप्सेले निर्धन उत्थान लघुवित्तको सेयरमूल्य समायोजन गर्दै प्रतिकित्ता १ हजार ४४० रुपैयाँ कायम गरेको हो। यसअघि यो लघुवित्तको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार प्रतिकित्ता १ हजार ६२७...